एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय प्रणाली ? | Nagarik News - Nepal Republic Media
एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय प्रणाली ?
२९ मंसिर २०७४ १५ मिनेट पाठ
काठमाडौं- राष्ट्रियसभा निर्वाचन प्रणालीबारे नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच विवाद देखिएको छ । दुई दलबीच राष्ट्रियसभामा आफ्नो पार्टीको प्रतिनिधित्व कसरी बढी गराउने भन्नेमा मतभेद देखिएको हो । एमाले र कांग्रेसको विवाद चर्किंदै जाँदा राष्ट्रियसभा गठनमा ढिलाइ हुने भएको छ । यस्तै निर्वाचनपछि दुई दलबीच तिक्ततासमेत बढ्ने देखिएको छ ।
बहुमतीय प्रणालीमार्फत चयन भए वाम गठबन्धनबाट राष्ट्रियसभामा ४८ जना सांसद छानिनेछन् । एकल संक्रमणीय आधारमा निर्वाचन हुँदा कांग्रेस र अन्य दलको कम्तीमा १४ स्थानसम्म सुरक्षित हुने अनुमान कांग्रेसको छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्य चयन स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष र प्रदेशसभाका विधायक (समानुपातिक र प्रत्यक्ष) को मतका आधारमा गरिन्छ । अध्यादेशमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ र प्रदेशसभाका सांसदको मतभार ४८ तोकिएको छ । स्थानीय तह चुनावमा प्रदेश नम्बर २ र ४ बाहेक अन्य स्थानमा एमाले अग्रपंक्तिमा छ । पछिल्लो समयमा दुवै दलबीच गठबन्धन भएपछि त्यो संख्या निकै बढेको छ ।
प्रदेश ७ को स्थानीय तहमा एमालेको ७९ मत छ । जसको कुल मतभार १ हजार ४२२ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा १८ सदस्य जितेको एमालेको ८६४ मतभार छ । एमालेको समानुपातिक गणनाअघि नै २ हजार २८६ मतभार रहेको छ ।
माओवादीबाट स्थानीय तहमा १६ जनाले मत हाल्न पाउँछन् । जसको मतभार २८८ हुन्छ । त्यसैगरी प्रदेशसभामा १० जनाले जितेर ४८० मतभार बनेको छ । यसरी प्रदेश ७ मा एमाले र माओवादीको गरी कुल मतभार ३ हजार ४५ हुन्छ ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७४ ०७:३७ शुक्रबार
एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय प्रणाली